Sadc: iaraha-mijery ny tontolon’ny vola aty Afrika | NewsMada
Sadc: iaraha-mijery ny tontolon’ny vola aty Afrika
Mitarika ny Fikambanan’ny Banky foibe aty Afrika tapany atsimo i Madagasikara, nanomboka ny taona 2018 hatramin’ny 2021. Nodinihina teto amintsika ny paikady hanatsarana ny tontolon’ny vola sy ny hiatrehana ny olana manodidina ity sehatra ity.
Natao teto Antananarivo, ny 11 hatramin’ny 13 septambra, ny fivoriamben’ny Vaomiera iraisan’ny governoran’ny Banky foibe (CCBG) ao amin’ireo firenena 16 mikambana ao anatin’ny tsenam-paritra tapany atsimo sy atsinanan’Afrika (Sadc).
Nilaza ny governoran’ny Banky Foibe Madagasikara (BFM), Rasolofondraibe Alain, fa anisan’ny nodinihina nandritra ity fivoriambe ity ny tontolon’ny vola aty atsimon’Afrika ho an’ireo firenena ao anatin’ny Sadc. Tsapa mantsy fa mihasarotra ny toe-draharaha toekarena ankapobeny maneran-tany. Noezahina karohina ny vahaolana, ary nisy ny fifanakalozan-kevitra.
Narindra ny paikady
Nojerena koa ny fiaraha-miasa, amin’ny lafiny fanaraha-maso sy ny fomba fifanakalozam-bola, ny lafiny lalàna, ny fivoarana sy ny fampiasana ny teknolojian’ny fifanakalozam-baovao sy ny informatika hanatsarana ny fomba fiasan’ny banky foibe, sns.
Mpikambana ao anatin’ny Sadc i Madagasikara, nanomboka ny taona 2005. Maro ny tombontsoa azo niarahana tamin’ny mpikambana ao anatin’ny vaomiera CCBG. Anisan’izany ny fiarahana mandrindra ny paikady amin’ny lafiny vola, mba tsy hiantraika mafy loatra amin’ny toekarena sy amin’ny sandam-bola isaky ny firenena ny fiovaovan’ny tsenam-bola iraisam-pirenena.
Ny firenena 16 mpikambana ao anatin’ny Sadc; Afrika Atsimo, Angola, Botswana, Lesotho, Madagasikara, Malawi, Maorisy, Mozambika, Namibia, République demokratika Congo, Seychelles, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Kaomoro.